कोरियाका मानिसहरु आफूले आफैंलाई किन थप्पड हान्छन? कारण थाहा पाउँदा दुनियाँ चकित – Eps Sathi
December 7, 2021 761
यदि कोहि मानिसले आफूले आफैंलाई थप्पड हान्छ भने धेरैजसो मानिसले उसलाई मनोरोगी भएको ठान्दछन। तर कोरियाका जनताहरु यो कुरालाई मान्दैनन। यहाँको केहि मानिसहरु आफूले आफैंलाई थप्पड मार्ने गर्दछन। यसरी कसैले आफूले आफैंलाई थप्पड हानिरहेको छ भने कोरियामा यसलाई अनौठो रुपमा पनि लिइदैन। यसको कारण एकदम अनौठो र चाखलाग्दो रहेको छ।
कोरियामा आफूले आफैंलाई थप्पड हान्नु यहाँको जनजिवनको एक हिस्सा हो। किन कोरियनहरु यस्तो गर्छन त? कोरियामा कसैले आफूले आफैंलाई थप्पड हान्नु भनेको आफैंलाई सजाय दिनु होइन। यो त महिलाहरुले गर्ने गरेको व्युटी ट्रिटमेन्ट हो। कोरियामा महिलाहरु आफ्नो शुन्दरतालाई निखार दिनका लागि आफैलाई थप्पड लगाउने गर्दछन। आफ्नो शुन्दरतालाई निखार दिने यसो गर्ने चलन खास गरि दक्षिण कोरियामा प्रख्यात रहेको छ।
कोरियामा आफ्नो शुन्दरतासँग जोडिएका कैयौं यस्ता अनौठा तरिका तथा चलनहरु रहेका छन। त्यस मध्येको यो पनि एक हो। शुन्दरता बढाउनका लागि गरिने यस्तो तरिकालाई कोरियामा ‘स्लापिङ थेरापी’ भन्ने गरिन्छ। यस्तो तरिकाले के साँच्चै अनुहारमा चमक ल्याउँदछ त? कोरियन महिलाहरु यो कुरामा विश्वास गर्दछन। उनिहरुका अनुसार यदि आफ्नो गालामा ५० थप्पड लगाउने हो भने अनुहारको छाला चम्किलो हुन्छ।
कोरियन महिलाहरुको अनुसार गालामा ५० थप्पड जति लगाएमा छाला चम्किलो हुँदै जानेछ। तर कोरियनहरुका अनुसार थप्पड लगाउनु भनेको गालामा हल्कासँग थप थपाउनु हो। गालामा दुख्ने वा डाम बस्नेगरि हान्नु भने होइन। यस्तो थेरापीले खासमा के फरक ल्याउँदछ त? कोरियाली महिलाहरुको विश्वास अनुसार स्लापिङ थेरापीले अनुहारमा रगतको सर्कुलेशन बढाउँदछ जसले गर्दा छालमा निखार आउँदछ।
कोरियामा प्रख्यात रहेको यस्तो थेरापी विस्तारै कोरियाभन्दा बाहिर पनि प्रचलनमा आउन थालेका छन। थेरापी गर्नेहरुका अनुसार यसले उनिहरुलाई राम्रो देखिन मदत गरेको छ। कोरिया तथा कोरिया भन्दा बाहिरका देशहरुमा महिला मात्र होइन पुरुषहरुले पनि यस्तो थेरापी गर्ने गरेका छन। यो थेरापीले महिला वा पुरुषलाई लामो समयसम्म पनि जवान देखिन मदत गर्दछ।
Prevके दक्षिण कोरियाले फेरि भिजा सकिन लागेका कामदारको भिजा १ बर्ष थपेको हो? बुझौं
Nextकोरियामा भिजा सकिन लागेका कामदारहरुको भिजा १ बर्ष थप हुने, हेरौं क कसको थपिन्छ?
बहिनीलाई बिएससी नर्शिङ पढाउने पठाओ राइडर सुनिलको सपना टिप्परले पार्यो चक’नाचुर
प्रभु बैंकले गर्यो कमाल, नाफामा करिब ४० प्रतिशतको बृध्दि